Izitayela zesimanje zamadoda | Amadoda aSitayela
IsiJalimane Portillo | | Izitayela zezinwele
Izitayela zezinwele zamadoda ziyashintsha ngokuhamba kweminyaka futhi ngokufika kwezimfashini nezitayela ezintsha, kufanele sizivuselele uma sifuna ukuba nesitayela esihle. Kule ndatshana esizoxoxa ngayo izinwele zezinwele zamanje zamadoda zango-2018. Sihlangabezana nezitayela zezinwele ezisukela ezimfishane nezenziwe ngomshini ziye ezinde futhi ezingahlelekile. Sizodabula umgundi wezinwele futhi sizokutshela imingcele yesitayela esetshenziselwe ukudala izinwele nezinwele zezinwele zanamuhla.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi yiziphi izitayela zezinwele zesimanje zamadoda zango-2018? Qhubeka ufunde futhi uzothola okuningi.
1 Izitayela zezinwele 2018
2 Izitayela zezinwele ezihamba phambili zamadoda 2018
2.1 Fade kwekhanda
2.2 Isikhumba siyaphela
2.3 Isinwele se-Undercut
2.4 Ama-bangs aqoshiwe
Izitayela zezinwele 2018
Futhi ukuthi ukugunda izinwele kungaba ngezinkulungwane zezindlela. Ngayinye inesitayela sayo esimakiwe futhi inganikeza umehluko omkhulu ngokunye. Ziletha nobuntu kogqokile. Umuntu onekhanda elingenandaba akafani nomunye osebenze kakhulu. Uma ufuna ukuzama ezinye izitayela zango-2018, akukephuzi kakhulu.
Ukugunda izinwele ngakunye kuletha okuthile okukhethekile futhi eziningi zazo zidinga imikhiqizo efanelekile yekhanda ukuze ilunge. Hheyi madoda, ukugunda izinwele okufishane kuzohlala kuthandwa njalo. Muva nje ukugunda izinwele okulingene nobude obuphakathi kuye kwathandwa kakhulu. Abesilisa bangakhulisa izinwele zabo futhi bagqoke isikhumba sefeksi esinezinwele ezimfushane neziphakathi. Lokhu kukhulisa ukuguquguquka nokuhlukahluka kwekhanda.
Okunye ukusikeka okubonakala njengokuvame kakhulu ezinyangeni ezisanda kwedlula ukuthi kushiye ingxenye yezinwele ezinde ngaphezulu nokushefa ezinhlangothini. Kodwa-ke, i-undercut eqoshwe kakhudlwana, imiphetho, ukubuna, i-undercut, i-trim, nezinye izitayela zakudala zingena kahle kuzinwele zamadoda zesimanje. Ingxenye ehamba phambili yakho konke lokhu ukuthi phezulu okude ukwazile ukugqama kwezinye izitayela futhi, ngakho-ke, zisebenzela zonke izinhlobo zezinwele, ukwakheka nobude. Ngokuqondile, Abafana abanezinwele ezijiyile, ezi-wavy nezisontekile ngeke basheshe ukuthola isitayela sezinwele okufanele sigqokwe.
Izitayela zezinwele ezihamba phambili zamadoda 2018
Njengoba sishilo ngaphambili, ukukhetha izinwele ezinde, eziphakathi nendawo noma ezifushane kungenza umehluko omkhulu kwisitayela somuntu siqu. Izinwele ezimfushane zilula ukugcina nokugcina isitayela sesikhathi eside. Abadingi neze umkhiqizo omncane Uma udinga ukubukeka kochwepheshe ngomsebenzi ne-voila. Izitayela ezinde ziyimfashini futhi ziyaheha.
Yize kunconywa ukuthi abantu abasha bakhungathekiswe noma bacindezelwe ezinhlangothini, iningi labo likhetha ukusikwa kwesikisi ngokuqedwa kwe-tapered. Okulandelayo, sizobona ngamunye ngamunye izitayela zezinwele zesimanje zamadoda futhi ngokuqinisekile kuzoba khona evumelana nalokho okuthandayo. Bheka ezinye zezitayela zezinwele ezipholile kunazo zonke futhi ezisesitayeleni ukuze zivumelane nabo bonke ubude nezinhlobo zezinwele.
Ukufiphala okusikiwe ukubukeka kwesimanje okuqhubeka nokukhuphuka ekuthandeni. Isici ukuthi ichaza le kwekhanda nge-taper kancane ngobude bezinwele. Ngasezansi kwekhanda, izinwele ziba mfushane ngokuqhubekayo futhi zingaphela nasesikhunjeni. Kungakho igama le-gradient.
Kukhona ukuhlukahluka okuningi kokugunda izinwele okuphelile kwamadoda. Amagama ayadida kancane, kepha sizozama ukuwenza ucace ngangokunokwenzeka.
Okwe-Fade cut kunezinhlobo ezimbili: eziphakeme neziphansi. I-fade haircut ephezulu isitayela esiphakeme sokusika nesitayela. Qala phezulu ezinhlangothini nasemuva. Izinwele zihamba kancane entanyeni.
Ngakolunye uhlangothi, i-gradient ephansi iqala emaphethelweni okusika nasolayini lwezinwele, ngenhla kwezindlebe. Isigaxa asibonakali kwezinye izindawo. Ukufiphala okuphansi kuvame ukubhekwa njengokugunda izinwele okulondolozayo nokunobuchwepheshe. Okuphezulu kukhombisa isikhumba esiningi. Abafana bangahlanganisa izinhlobo ezahlukahlukene zokufiphala, njengokufiphala kwesikhumba okuphansi noma ukufiphala okuphezulu.
Kuyacaca ukuthi uma udinga ukukucabanga kahle ukuthola ithoni ephezulu noma ephansi futhi ungazi ukuthi iyiphi ezokusebenzela kangcono, Cela iseluleko kulowo ocwala izinwele.
Olunye uhlobo lokugunda izinwele, olunolaka kakhulu nolweqisayo. Esikhundleni sokuncipha futhi ugcine unezinwele ezimfushane kakhulu, ukuphela kwempandla kufaka phakathi izinwele ukuzibandakanya nesikhumba. Lolu hlobo lokuzishintsha kombala lungabonakala kahle ngokuzihlanganisa nezitayela zezinwele ezimfishane neziphakathi nendawo. Akuhambisani kahle nezinwele ezinde. Kuyalulekwa futhi ukuthi ube nezinwele zobuso ezijiyile ukukhulisa ukwakheka nemiphumela.
Ukusikwa kwe-buzz ngaphezulu ngesikhumba esibunayo ezinhlangothini kunesitayela esihle esinjengesempi. Okubi ngaleli khanda ukuthi akunikeli okunhlobonhlobo.
Enye yezinwele zezinwele zamanje zamadoda. Lokhu kusika kufaka izinwele ezimfishane ezinhlangothini zekhanda nangasemuva. Umehluko kusuka kwekhanda langaphambilini ukuthi lokhu kusika kubude obulodwa kuphela. Kufanele iqalwe phezulu kakhulu, ngoba igunda izinwele kusuka phezulu ukuhlinzeka ngomehluko oqinile phakathi kwaphezulu okude nezinhlangothi ezimfushane.
Uhlobo oluvame kakhulu lwalolu hlobo lwekhanda yi-undercut eqonde emuva eqondile. Ngaphandle kwalokhu, abantu abaningi bayihlanganisa nezinye izitayela ngaphezulu, njengezinwele ezithile ezingcolile nezinye izinwele ezilungisiwe. Lokhu kusika kuqale njenge-hipster kakhulu, kepha sekuyinto ethandwa kakhulu ezindaweni zokugunda izinwele.
Imiphetho ngokwezinwele zezinwele zesimanje zamadoda zidlula emigqeni. Ngonyaka owodwa zisemfashini kanti kwesinye azikho. Kulonyaka we-2018, imiphetho ebunjiwe ibe yimfashini kakhulu kwabesilisa abanezinwele ezisontekile. Lokhu kungenxa yokuthi Izitayela zezinwele eziminyene nezisontekile kungaba nzima ukuphatha.
Ngaphandle kwalokho, ukufaka igebe elifushane ekubukekeni kwakho kungaba yindlela elula yokushintsha ukusika kwakho. Noma ngabe ufuna ama-angled angs ukukhombisa ukuthungwa noma umbala wezinwele zakho, noma ama-bangs abuthuntu ukubiyela ubuso bakho, lezinwele zezinwele zingafanelana nokubukeka kwanoma yimuphi umuntu.
Ngiyethemba ukuthi ngalezi zeluleko nezitayela zezinwele ungakhetha esifanelana kahle nesitayela sakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izitayela zezinwele » Izitayela zesimanje zamadoda